Fadeexad dul-hoganeysa Wasiir Dubbe | KEYDMEDIA ONLINE
Fadeexad dul-hoganeysa Wasiir Dubbe
Waraaqdaan ka soo baxday Xafiiska Hantidhawrka Guud waxaa Wasiirka Wasaaradda Warfanfinta, lagu amray in uu si degdeg ah uu gebi ahaanba u joojiyo arrinka bixinta dhulka Tiyaatarka Qaranka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waraaq ka soo baxday Xafiiska Hantidhawrka Guud, kuna socota Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka & Dalxiiska XFS, lana ogaysiiyay Xafiiska xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka iyo Ra'iisal Wasaaraha Xil-gaarsiinta, ayaa lagu joojiyay maqaayad laga dhisayo dhul bannaan oo ku yaalla Tiyaatarka Qaranka.
Wasiirka Warfaafinta, Cismaan Dubbe, waxaa lagu eedeeyay habka uu wajahay arrinta “Sida ay Wasaaradda Warfaafinta u wajahday arrintan ayaa ah mid aan wanfaqsanayn nidaamka Dowliga ah, shuruucda dalka iyo wareegtooyinka hay'adaha Dowladda” ayaa lagu yiri war ka soo baxay Hantidhawrka Guud.
“Wasaaradda Warfaafinta ayaa si cad ugu xadgudubtay nidaamka dowliga ah iyo shuruucda dalka, maadaama Wasiirka Wasaaradda uu maamulka hantida Wasaaradda u maray sifo aan sharciga waafaqsanayn, sidoo kalana wax dan/faa'iido ah aysan ugu jirin guud ahaan shacabka iyo bahda fanka Soomaaliyeed oo lafdhabar u ah Qarankeenna”. Ayaa sidoo kale ka soo baxay.
Sidoo kale, waxaa Dubbe lagu amaray inuu muddo 72 saacadood gudahood ah, marka warqada Hanti-dhowrka soo gaarto uu soo sauro qoraal rasmi ah oo lagu joojinayo bixinta dhulka Tiyaatarka Qaranka iyo in Xafiiska Hantidhawrka Guud uu la wadaago dhammaan heshiisyada la xiriira dhulal kale oo ay Wasaaraddu bixisay haddii ay jiraan.
Waxaa Dubbe, loogu baaqay in arrimaha maamulka hantida Wasaaradda aan looga faa'lidaysan dano gaar ah ama shaqsiyadeed, in uu gacan siiyo bahda funka iyo dhaqanka oo kaalin muhim ah uga jira dib u dhiska dalka iyo wacyigalinta dadweynaha.
Dhawaan ayay ahayd markii buuq xooggan ka dhashay qeyb ka mid ah dulka Tiyaaratka oo Wasaaradda Warfaafinta ku wareejisay haweeneyda leh, Xaawo Taako Hotel, taas oo laga kireeyay mudd labaatan sano ah.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, ayaa Dubbe, ku amray in la joojiyo heshiiska, hayeeshee, cabasho ka soo laabatay qoraal uu qoray Dubbe, waxaa dhawaan si buuxa go’aan uga gaaray Xafiiska Hantidhawrka Guud.